Eziokwu Banyere Egwu America - Reeddịrị
Eziokwu Banyere Egwu America
Iwe dị egwu? Ime ihe ike? CHEGOD A ECHICHE. Na Egwu America nkịta bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ iwe iwe.
Emepụtara kpọmkwem maka mkpakọrịta , nkịta a ga-anọnyere gị ruo ọnwụ ka ị kewaa.
Site na ụdị Bully, nkwanye ugwu na ịkpa oke agbụrụ jupụtara ebe niile.
Anọ m ebe a ịgwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere Egbu Egwu America, yabụ na ị maara eziokwu banyere nkịta a hụrụ n'anya tupu ị kpebie ma ọ bụ ya bụ nri kwesịrị ekwesị maka gị.
Kedu ihe bụ Bully American?
Wuru Dika Osisi
Bred ịbụ ezigbo enyi gị
Trainingzụ Otu Egwu America
Eziokwu Ahụ Ike America
Chọta Kachasị Mma American Bully Breeder
Bdị Nkịta Nkịta Ndị Yiri nke American Bully
Mmechi: Ndi American Bully the breed for you?
Onye American Bully mbụ bred na United States n'etiti 1980 na 1990.
Echiche na-ezighi ezi na ya na Pit Bull bụ otu. Nke a bụ B TRGH TR Eziokwu . Onye American Bully nwere mkpụrụ ndụ Pit Bull na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ mbụ ya, mana ndị ọzọ Bull Dog na-agwakọta ya, na-enye onye American Bully ya ọdịiche.
Ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ewepu Pit Bull bụ enweghị ọghọm, ma obu. Ndị nwere ọmịiko nwere ọmịiko chọrọ nkịta na egwuregwu na-ewu na a ala ọgụ mbanye. Njirimara ndị a bụ ihe kpatara eji emegbu ndị America Bully ngwa ngwa dịka otu n'ime ụdị ụdị ewu ewu taa.
Ndị American Bully bụ ndị ndị ọchịchị nabatara American Bully Kennel Club na 2004, ebe edepụtara usoro ọmụmụ ahụ ma chekwaa ụdị ọkọlọtọ. Ọ ghọtara site United kennel Club na 2013.
Nwere ike iji Pit Bull na American Bully na vidiyo a:
Egwuregwu ndị America na-egosi omume Bully nwere ihu ọma, dịka a obosara ihu, ọkpụkpụ dị arọ, isi squarish na nnukwu jaws na mkpụmkpụ, muscular ụkwụ. Odu toro ogologo ma adighi ada.
Bredị a na-abata 4 nha . Nke a bụ ihe ịkwesịrị ịma.
Ọkọlọtọ: Nke a bụ 20 n'ime (51 cm) nkịta dị nha nke nwere ahụ muscular na isi ngọngọ.
N'akpa uwe: Nkịta a ruru 17 sentimita asatọ (43 cm) na, dịka ị nwere ike ịkọ, bụ nkịta dị obere.
XL: Nnukwu nwa nwoke, ụdị a ruru ogo nke 20 sentimita asatọ (51 cm).
Omuma: Onye America a na-atụ egwu nwere otu nha dịka ọkọlọtọ, mana ihe mere ka ọ dị iche na ụdị 3 ndị ọzọ bụ ya wuo. Omuma a ma ama pere mpe, nwere ogologo ụkwụ na warara dị warara. A na-ekwu na kpochapụwo yiri Pit Bull karịa ụdị ndị ọzọ.
N'ihe banyere ibu arọ Bully nke America, ọ dị iche na ogo ọ bụla. N'ezie, a na-ahụta ndị niile na-emegbu ndị America ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ruo otu afọ. Averagedị ụdị ụdị ìgwè a nwere ike ịdị 66 to88 lb (30-40 n'arọ).
N’ihi ịdị iche / ịdị arọ ya dịgasị iche, American Bully na-eme ihe kwesịrị ekwesị ọnọdụ ọ bụla n'ụlọ , ma obu ulo na obodo ma obu ulo nwere oke. Naanị buru nha gị.
Ọ bụrụ na ị hụ ụdị 'Pocket Bully', 'Micro' ma ọ bụ 'XXL' nke ndị na-azụ ihe na-akpọsa, mara na usoro ndị a bụ amataghi ABKC.
Ọ bụrụ n’inweta obere Bully nke America ma na-atụle ihe nkịta na-egosi dị ka ọrụ, buru n’uche na obere nkịta na-abụkarị ntaramahụhụ ma ọ bụ ọbụna disqualified n'ihi na adabaghị na ihe a chọrọ elu dị elu.
Onye na-emegbu onwe ya onye America
Otu n'ime njirimara kachasị mma nke ụdị a bụ etu obere mmezi ọ dị. Egwuregwu ndị America na-emegbu a mkpụkpu, dụ mma nke ahụ nwere ike ịbata ụdị agba ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọ bụ B hypoGH hypo hypoallergenic , kootu ahụ bụ obere ịwụfu. Naanị ihe ị ga-eme bụ ihicha gị Bully otu ugboro n'izu. Enweghị onye na-edozi ahụ chọrọ, yabụ na ọ nwere ụfọdụ ego ọzọ ga-adị n'akpa gị!
Buru n'uche na nkịta a ruru eru maka ọnọdụ okpomọkụ. Ọ bụrụ na ibi na mpaghara ebe oyi na-atụ, ị gaghị edebe American Bully gị n’èzí na-adịgide adịgide.
Ike Ike Egwuregwu America
Fọdụ ndị nwere obi abụọ banyere American Bully maka ebumnuche ole na ole. Ebu ụzọ si na Pull Bull, ọ nwere ọdịdị na-eyi egwu ma na-ejikarị ya eme ihe dịka nkịta na-eche nche.
Ọ nwere ike isiri gị ike ịhapụ anya gị pụọ na nnukwu agba agba nke American Bully. Ma, ha bụ ihe mgbochi ígwè nke kwesịrị ịtụ egwu?
Enweghị m ike ịchọta atụmatụ a kapịrị ọnụ maka ụdị ụbọ a na-ata aru PSI. Ma, anyị nwere ike ile anya na Olulu ehi na American Bulldog iji nweta nghọta ka mma.
Olulu ehi nwere PSI nke 235 . Nke a bụ ezigbo ọnụọgụ ike ma e jiri ya tụnyere ụdị nkịta ndị ọzọ. Ka o sina dị, ọ dịkarịrị aha ọjọọ na mgbọrọgwụ na ọgụ nkịta na-eme ka Pit Bull taa egwu.
Ihe ike American Bulldog bụ 305 PSI , nke na-ebu mkpọ karịa Pit Bull. A naghị ele ụdị a anya dị ka onye na-eme ihe ike, na-ekere òkè na American Bully maka ịbụ nkịta ezinụlọ dị nro.
Ndị a bụ ụdị Bully, yabụ na anyị nwere ike ịchịkọta na ike ịta ahụhụ ndị America nwere ike ịdị n'etiti 200 na 300 PSI dị iche iche.
Dogdị nkịta ọ bụla nwere ike ịta aru, mana ọ dabere na onye nwe ya na ego nke mmekorita nkịta anatawo nke na-ekpebi omume ya. Ya mere, nke a abụghị ike na-atụ egwu!
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta ibe, American Bully bụ nhọrọ magburu onwe ya. A sị ka e kwuwe, a na-azụ nkịta a maka ọnọdụ ahụ.
Dabere na ụkpụrụ otu, nke a bụ nwere obi ike na Na-elekọta mmadụ nkịta. Won’t gaghị echegbu onwe gị gbasara omume enweghị atụ ma ọ bụ nke skittish.
Onye American Bully anaghị enwe obi abụọ ma ọ bụ kpachara anya. Kama, ọ ga-egwu iji zute ndị enyi gị, na-esonye na ndị ọrụ ahụ ngwa ngwa.
Kedu ụfọdụ njirimara ndị ọzọ ejiri kọwaa ụdị agbụrụ a? Iguzosi ike n'ihe, na-egosi ịhụnanya na dị nwayọọ n'elu ndepụta.
Egwu America bụ ọgụgụ isi , na-eche ma na-ekiri tupu ịmegharị. Ọ hụrụ ime ihe na-amasị ya, yabụ ị ga-atụ anya na ọ ga-amụta ngwa ngwa ma zaghachi na enweghị mgbagha nrubeisi.
Nke a bụ dị ike pup, yabụ buru n’obi na ọ bụrụ na ọ naghị enweta oge ọkụ calorie ya kwa ụbọchị, ọ nwere ike wepụta ya na akpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ arịa gị.
Thisdị a ọ na - eme nke ọma n’ebe ụmụaka nọ?
The Pit Bull kwuru na dị ka ' Nanny Nkịta ”N’akụkọ ihe mere eme nile, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na a na-amata American Bully na ọ bụ onye nsọ gburugburu ụmụntakịrị.
Enweghị mwakpo, ọ dịghị ìgwè ehi, ma ọ bụghị nkwụsị! Ọ bụrụ na nkịta gị bụ maara nke ọma , a ga-adọrọ mmasị ya n'àgwà ụmụaka na-enweghị nlekọta. Roughhousing dị mma, ọ gaghị azaghachi. Kama, American Bully ga - ekwe ka ụmụaka gafere ya niile!
N'agbanyeghị ụdị izu ị nwere, a na-atụ aro ya ahapụla nkịta naanị ya ya na obere nwa.
Ọ na-eme nke ọma na anụ ụlọ ndị ọzọ?
Ndị American Bully bụ nkịta na-elekọta mmadụ. Ọ hụrụ ya na ndị ọzọ n'anya, gụnyere anụ ụlọ. Dị ka ụdị ọ bụla, mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na nwata bụ isi ihe iji hụ na nwa ahụ ga-abụ nke ọma na ọnọdụ ọhụrụ .
Anyị ga-ekwurita banyere mmekọrịta mmadụ na obere oge ka e mesịrị, mana n'ozuzu, American Bully na-eme nnukwu pal n'ụlọ gị na anụ ụlọ gị ndị ọzọ ma ọ bụ na ogige nkịta.
Ndi American Bully na-eme ihe ike?
Ka anyị kwụsị ma nwee mkparịta ụka gbasara nkịta nkịta. Site na ụdị Bully, ọkachasị nkịta nwere mgbọrọgwụ Pull Bull, echiche na echiche na-ezighi ezi abụrụla ụkpụrụ.
Obi abụọ adịghị ya, nkịta ndị a siri ike, na-agile ma na-agba ume. Ha na-eme nke ọma n'egwuregwu ma nwee ike iji finesse merie nsogbu ọ bụla.
Ha na-adịkwa ka nke siri ike, nke nwere uru na-agba agba na agba agba.
Nsogbu dina ịlụ ọgụ . A na-ejikarị ndị na-emegbu mmadụ (karịsịa Pit Bulls) eme egwuregwu ndị a dị egwu. A na-azụ nkịta kpọmkwem maka ịkpa ike, na-emebi agwa sitere n'okike ịbụ onye kwesiri ntụkwasị obi ma dị nwayọ.
Nkịta ndị a bụ ọ bụghị ọkọlọtọ izu. Ndị mmadụ na-emegbu ha, na-eduga na nhụsianya nke na-akpata nsogbu omume.
Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa ka ị buru n'uche mgbe ịhọrọ onye na-azụ ihe, iji hụ na ị zụrụ nwa nkita nke malitere ndụ na gburugburu ebe obibi ịhụnanya.
Yabụ, Mba, Onye Egbu Egbu America bụ esiteghi na ike ike . Ihe niile dabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa, ozuzu, na ọzụzụ (nke, na-aga maka ụdị nkịta ọ bụla).
Ma ị na-ekpebi splurge na a ọkachamara nkịta ọzụzụ ma ọ bụ chọrọ bido ya n'onwe gị, ọzụzụ na-hoo haa na-atụ aro maka American Bully.
Nke a bụ nkịta na-achọ ọrụ ọ ga-erube isi dị ka o nwere ike iji mee onye nwe ya ọ hụrụ n'anya obi ụtọ.
Dị ka onye nwe ya, ọ dị mkpa ịbụ nwee obi ike, ndidi na iguzosi ike , ghara igosi obi nkoropụ. Ọbụghị naanị nke a na-enyere aka kuziere nkita onye isi , ma na-eme ka ọnọdụ nke ịkwanyere ugwu na ịgbaso iwu.
Trainingzọ 3 kachasị mma maka ọzụzụ maka ndị America Bully
1. Nkuzi ọzụzụ
American Bully puppy enweghị eriri afo njikwa ruo Ọnwa atọ . Nkuzi ọzụzụ ekwesịrị itinye n'ọrụ ozugbo ị kpọbatara nwa gị.
Imefu obere oge na crate na-enyere aka ịmepụta usoro. Nakwa, nkịta ndammana achoghi inwe mposi ebe ha dinara ala.
Lọ ebe ahụ ghọrọ “ebe nzuzo” nke nkịta gị nwere ike iru ala ma dịkwa mma.
2. Ọzụzụ nrube isi
Nrubeisi bụ àgwà ejiri mara ụdị a. Ndị na-emegbu ndị America si na a na-arụ ọrụ nkịta ndabere na ga-amụta ịgbaso iwu ngwa ngwa. Ọ bụ ya mere ha ji eme nke ọma na ngosipụta ma mee oke nkịta na-elekọta / ọrụ.
Site na ịmalite nrubeisi na mbido, a ga-akwụghachi gị ụgwọ na nkịta a pụrụ ịtụkwasị obi, nke nwere ezi uche nke na-aghọta ị bụ onye na-elekọta.
Can nwere ike iku onye nkuzi ọkachamara, mana ọ bụrụ na ị na-eme ya n'onwe gị, jide n'aka na ị rapara na atụmatụ. Ikwenye bụ isi na ụdị ọzụzụ a. Ga-achọkwa daa jụụ , ghara iti mkpu ma ọ bụ nyewe obi nkoropụ.
3. Mmekọrịta mmadụ
Nke a bụ usoro kachasị mkpa maka ọzụzụ maka American Bully. Ọ magburu onwe ya na ụmụaka mana enwere ike kwụ ọtọ na nkịta ndị ọzọ ọ gwụla ma ọ bụ nke ọma na-eto eto site na nwata.
Nwere ike iwebata ya na nkịta ndị ọzọ site na ịkpọbata ya na ogige nkịta na ngwụsị izu. Debe ya na nkwekọrịta ma hapụ ya ka ọ jiri nwayọ bịakwute ndị enyi ya na-ewe iwe iji zute-ma-kelee. N'oge na-adịghị anya, ebumpụta ụwa ya maka ịpụ apụ ga-ewere ya na ọ ga-ebugharị ọdụ ya iji zute onye ọ bụla.
Abịa na ahụike, American Bully na-eme ọfụma. O nwere nkezi ndụ ndụ nke 8 ruo 12 afọ.
Site na nkịta ọ bụla, e nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke a na-ahụkarị ma a ga-ewere ya. Otu a ka ọ dịkwa maka American Bully. Zọ kachasị mma iji zere ọrịa ndị a bụ ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-azụ ya. Aga m akụ na nke a ma emechaa!
Nke a bụ ndepụta nke nsogbu ahụike American Bully kachasị mma.
Hip Dysplasia: Hip dysplasia bụ nkwarụ na-echegbu onwe ya n'ihi na enweghị ike ịchọpụta ya ruo mgbe nkịta ahụ toro. Ọdịdị na-adịghị mma nke nkwonkwo hip na-eduga na nrụrụ na-egbu mgbu nke na-eme ka ọ ghara ịdị na-agagharị ma ọ bụ na-emegharị ahụ.
Cleft palate / egbugbere ọnụ: Ugbu a na-amụ nwa, nke a bụ nkwarụ nke egbugbere ọnụ elu ma ọ bụ ọnụ. Ọ bụghị ndụ egwu, ma kpere ịchọ mma. Surgerywa ahụ dị mfe bụ naanị ihe ọ ga - ewe iji dozie ọnọdụ a.
Onwuka Chukwu Nke a bụ uto na-adịghị mma nke na-eme ka ikpere ikpere na-agbagha.
Congenital obi ọdịda: Nke a bụ ọnọdụ dị egwu ebe obi ga-abawanye. Nke a na - ebute mmiri na - ahapụ n’ime ahụ niile.
Demodectic mange: Nke a bụ nje na-akpata ntutu na ntutu n’akpịrị.
Ichthyosis: Nke a bụ okwu anụ ahụ na - eme ka pee na paw pad.
Atopy: Nke a bụ ihe nfụkasị anụ ahụ nke na-emetụta nkịta ma na-akpata nkasi obi.
Cerebellar onyinye: Dika odi, enwere ike ichoputa onodu a mgbe umu nwa nkita amuchara. Ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa a na-emetụta ụbụrụ na ụjọ.
Na-aga n'ihu Retinal Atrophy: Nke a ọrịa anya na-akpata anya ji nwayọọ nwayọọ. N’adịghị ọgwụgwọ, ọ nwere ike ibute ìsì.
Hypothyroidism: Ọrịa N'ihi nsogbu nke thyroid, ọrụ na-ebelata ma ibu ibu na-eru nso.
Cataracts: Nke a bụ ọrịa anya ọzọ nke na - eme ka nkịta jiri nwayọ nwayọ nwee ọhụụ. Enwere ike idozi ya na ịwa ahụ.
Oge American Bully chow
Akwadoro ka inye nri na American Bully gị Ugboro atọ kwa ụbọchị.
Inye Ugboro Ugwu America na-echebara echiche pụrụ iche ebe ọ bụ na ụdị a na-ata ahụhụ ibu, akpụkpọ allergies , na ikuku . Site n'ịnọgide na-edozi nri kwesịrị ekwesị, enwere ike izere nsogbu ndị a.
Nwere ike ịhọrọ raw nri, nke gunyere akwukwo nri, nkpuru osisi, anu aru, azu, ezi, toki na akwa. Nri a juputara na nri na ọ nweghị nke nchekwa, ihe mgbakwunye, na nzacha dị na nkịta ọdịnala.
Nọgide na-eri nri ị rawụ nri pụrụ ịbụ ihe na-eri oge ma na-efu ụfọdụ ego. Kama, họrọ maka adịchaghị, elu nkịta nri maka onye mmegbu gị nke America. Gbaa mbọ hụ na ejiri ya protein na ọkpụrụkpụ carbs (obughi oka).
Ọ bụ ihe mmega ahụ
Onye American Bully bụ onye nwere ume siri ike ma chọọ oge egwuregwu. ’Llkwesịrị ịmega ya maka opekata mpe otu awa kwa ụbọchị, o r ozo o gha abia onu site na ibibi ulo.
Ndị a bụ ụfọdụ echiche iji mee ka American Bully gị na-agagharị ma na-agwụ ike.
Na-eje ije: Nke a bụ ezigbo nhọrọ mgbe niile! Were nkịta gị gaa ogologo oge, ije ije na ogige ahụ ma ọ bụ ọbụna ụzọ ụkwụ na-agagharị n'okike.
Igwu: Nke a dị oke mma ma ọ bụrụ na ibi n’ebe dị ọkụ. Igwu mmiri dị mma maka nkịta na ọkụ na nkwonkwo. Tụba bọl n'ime ọdọ mmiri ma lelee American Bully gị ka ọ na-agba agba.
Ọzụzụ agility : Ọbụghị naanị na nke a na-ama nkịta gị aka n'ụzọ anụ ahụ, mana n'uche. An ga-eji usoro agility ọzụzụ wee mee ka irube isi sikwuo ike.
Ọgba tum tum: Bido na-eme ihe site n'iji nwayọ na-agagharị ebe nkịta gị na-agba ije n'akụkụ igwe kwụ otu ebe. N’oge na-adịghị anya, unu abụọ ga na-akwasị okporo ụzọ.
Mụaka na egwuregwu mgbagwoju anya: Tinye ego n’ego eji egwuri egwu egwuruegwu iji nye onye na-emegbu gị American ihe ị ga-ata n’ụbọchị mmiri na-ezo karịa akpụkpọ ụkwụ gị. Ihe mgbagwoju anya nke nkita na-akpali ụbụrụ, nke bụ ihe ìgwè a na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na inwe onye American Bully nọ n’elu ndepụta ihe ị ga - eme, yabụ ka anyị banye n’ime otu akụkụ dị mkpa nke ntuziaka a: ịchọta ndị na - eme ihe.
Nke mbụ, dị njikere iri nri siri ike. Onu ogugu onu ahia nke American Bully di n'etiti $ 2000 na $ 5000 . Nke a bụ nkịta a ma ama!
I nwere ike iche na ịchọta onye na-azụ nkịta dị mfe dị ka ọchụchọ Google. N'ezie, enwere ọtụtụ ọkọlọtọ uhie iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-azụ ya.
Ga-achọ ịkụziri onwe gị otu esi agagharị na ụzọ gị site na igwe igwe nkịta niile ị ga-ada na mmeri.
Kedụ ka ị ga - esi zere igwe na - akwụ puppy?
Mee oge ị ga-aga leta onye na-azụ ihe . Ndị na-azụ puppy achọghị ka ị hụ ọnọdụ adịghị mma ebe ha na-agbapụta puppy dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Otu breeder ụkpụrụ omume ga-akpọ gị òkù maka a tour, obi ụtọ na-egosi gị gburugburu. Ga-ahụ ma ọ bụrụ na ụmụ nkịta na-egwuri egwu n'èzí ma ọ bụrụ na ha ekpughere ụmụ anụmanụ na ndị ọzọ ma ị ga-ezute ndị nne na nna.
Gaa maka nwa nkita na-efu ntakịrị ihe. Na-akwụ ụgwọ maka ogo, ọbara dị ọcha, na nkwa ahụike.
Rịọ maka ahụ ike. Onye na-azụ atụrụ nwere aha ọma ga-eme ka ụmụ nkịta lelee ụmụ nkịta ahụ wee kpochapụ ya maka ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa, dịka hip dysplasia.
Zute ma kelee ndị nne na nna . Nke a ga - agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ọnọdụ ahụike na ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị ọzọ.
Jụọ maka akaebe. Gụ banyere ahụmịhe ndị ahịa gara aga na-enye gị ezigbo foto.
Buru ụzọ chọpụta ụdị a. N'ihe banyere ndị America na-emegbu mmadụ, ụfọdụ ndị na-azụ ihe na-adịghị mma ga-eme ka nkịta nwee steroid iji mee ka ha dịkwuo ike. Ọ bụghị naanị na nke a dị ize ndụ maka ahụike ha, mana mgbe obere oge gachara, ndị steroid kwụsịrị iji kpughee obere nkịta ị kwenyeghi.
Ihe niile gbasara ịjụ ajụjụ! Should kwesịrị ịdị njikere ịjụ breeder ajụjụ na Anglịkan.
Onye nwere obi uto na-enwe mmasị na nkịta ha ma chọọ ijide n'aka na ha gakwuuru onye nwe ha. Ha ga-achọ ka ha kpọtụrụ maka ọnwa ole na ole mbụ nkịta ga-eso gị laa.
Anyị emeela ka ị kpuchie ndị a na-ewu ewu na American Bully breeders ka ịlele.
Razor'sEdge na-emegbu mmadụ : Na-aga
Ekwensu Na-eme Ihe Ike : Jiri
Ndị na-agba egwu Texas: FL
Nnapụta ndị America na mgbaba
Ego nkịta nkịta ọhụrụ ahụ nwere ike ịbụ nke iru gị. Nsogbu adịghị! Nwere ike ịchọta ndị mara mma American Bullies na nnapụta.
Ndị nkịta a na-atọ ụtọ na-eche ka ha gaa n'ụlọ ha ebighebi wee jupụta gị n'ịhụnanya. Nke a bụ nke anyị ndepụta nke nnapụta ndị America na Bully. Ha nwere ọtụtụ ụdị Bully, ma ị nwere ike lelee azụ maka American Bully.
Amazing Grace Bully Nnapụta : FL
Ndị na-agba ume na New York : ỌH .R.
Ndịda Of The Bully Rescue : Oka
Bredị na-emegbu mmadụ na-ekerịta otu ihe: Ha sitere na mgbe ochie Molosser nkịta, dị ka Canis akukonta, ma ọ bụ American Bandogge , nke bu ngwakọta nke ụdị Molosser dị iche iche.
A na-egosipụtakarị ya keesemokwu , ụdị ndị a na-eburu ibu n'ihi ịdị ize ndụ. N'ihi aha a, ụfọdụ nkịta, dịka Pit Bull, bụ machibidoro na steeti ụfọdụ.
Eziokwu bu, na udiri anumanu anaghi anaghi agha. Ọ bụ ezie na ha nwere ike iyi ụjọ na nkwonkwo akwara, ha bụ nkịta na-emekọ enyi. Ọ bụ otú ụmụ mmadụ si emeso ma na-azụ anụ ụlọ ha na-ekpebi omume.
Ikekwe American Bully abụghị nke gị. Nke ahụ dị mma, enwere ọtụtụ ụdị Bully ndị ọzọ dị ebube.
Nke a bụ ndepụta nke nkịta ndị na-ekerịta ihe.
Onye America Staffordshire Terrier
Onye Victoria Bulldog
Nwekwara ike ịchọ ịlele Miniature English Bulldog .
American Bully vs. Pit Bull: gịnị bụ ihe dị iche?
Na mbu, enwere ike iju gi ihe mere udiri uzo abua a ji di iche. N'ezie, enwere ọtụtụ iche dị iche.
Nnukwu ihe dị iche bụ ọdịdị ahụ . Onye America Bully nwere isi buru ibu nke nwere imi snubby ma e jiri ya tụnyere ihu dị warara karịa nke Olulu ehi .
Egwu America bụ mkpumkpu karịa Pit Bull, tumadi n'ihi ụkwụ ya. Naanị ụdị kpochapụla nke American Bully ka amara ka nwere ụkwụ dị larịị.
Mgbe ọ na-abịa iwu, Pit Bull maara nke ọma maka akwara ya na obi ya, mana akwara bụ otu n'ime isi agwa ndị American Bully na-eri iji gosipụta. Nnukwu ọkpụkpụ, igbe sara mbara na akụkụ dị oke egwu na-eme ka ọ bụrụ anụ ọhịa siri ike.
American Bully na American Bulldog bụ otu?
Azịza ya dị nkenke MBA , ha abụghị otu ìgwè.
Na American Bulldog bụ akara ngosi ọdịbendị, ebe ọ dị ogologo oge karịa American Bully. Emeburu ya ka o ghara ikpochapu ya Ochie English Bulldog , wetara ndị US site na ndị kwabatara.
American Bulldog bụ nri oru ugbo , yana ihe nkiri nkịta na egwuregwu. Onye American Bully, n'aka nke ọzọ, bụ nsị nke Pit Bull, bred maka mkpakọrịta.
Nwere ike ịkọrịrị ụdị anụ ọhịa abụọ a site na nke ha ọdịdị ahụ . American Bulldog toro ogologo, nwee ogologo ụkwụ yana anụ ahụ na - aga nke ọma. Isi ya dị ogologo karịa nke American Bully.
Wuru dika anumanu, American Bully bu nsogbu ojoo! Atụla egwu site na mbara ahụ sara mbara, buru ibu na nnukwu jaws. Nkịta a nwere ọtụtụ ịhụnanya ọ ga-enye.
Ka anyị mee ngwa ngwa na ụdị a, ma ị nwere ike ikpebi ma ọ bụ egwuregwu gị.
Wide kwa mkpakọrịta
Ndị na-emegbu mmadụ bụ 'Nanny Dogs', ya mere ha mee ụmụaka nke ọma
Ezigbo ọgụgụ isi ma dị mfe ịzụ
Obere mmezi ejiji ( B hypoGH hypo hypoallergenic )
Kwesịrị ekwesị maka ụlọ na ụlọ n'ihi ọtụtụ ụdị iche
Enwere ihe ngosi, asọmpi na nkịta ọrụ
Kwesịrị ịrara oge zuru oke maka ọzụzụ, ọkachasị ịkpakọrịta . Nke a dị mkpa iji gbaa obi ike gburugburu nkịta ndị ọzọ na ndị mmadụ.
Ibu, gassiness, na allergies na anụ ahụkarị, yabụ ahụike (oge ụfọdụ dị oke ọnụ) nri dị mkpa.
Ike dị elu pụtara mmega ahụ kwa ụbọchị bụ ihe dị mkpa iji zere àgwà mbibi.
Kedu ihe ị chere gbasara American Bully? Gwa anyị na nkwupụta!
Papillon Chihuahua mix: chọpụta ihe a zoro ezo
Dorgi: to chọrọ ịdị ka Queen? Nweta ngwakọta Corgi-Dachshund!
ngwakọta labrador na onye ọzụzụ atụrụ German
ọcha husky German onye ọzụzụ atụrụ mix
bekee atụrụ na nkịta na poodle mix
Siberian husky aha maka ụmụ nwoke